Oku bust ngeposi yi-Laura, bethu resident ingcali kwi ibhinqa ukuhamba. Italy yi ethandwa kakhulu bucket-uluhlu into kuba abantu abaninzi, kodwa yayo s a enkulu kwaye diverse ilizwe ukuba traverse. Ukususela non-stop vineyards ukuba nasiphelo carbohydrates (iitoni eziyi-ka-sightseeing kwi phakathi), nanku kubekho inkqubela s isikhokelo ilawula Italy. Izizathu ukuba utyelele Italy ingaba njengoko varied njengoko yayo gelato flavors. Abanye abantu yiya ukufumana incasa ezimbalini, ngeli lixa abanye bathabatha nesabelo umphandle imisebenzi. Kuba mna, Italy kuko konke malunga indulgences kwaye overindulgences. Ukususela architecture ukuba ukutya ukuze iwayini ubomi, Prussia yiya bonke baphuma. Siyazi njani ukuba badle, siyazi njani dress, kwaye baya kuyazi njani umntu. Abafazi kufuneka enze pilgrimage ukuba Italy ngexesha elinye incopho okanye omnye ukubona bathabathe batye kwi-Italy ke pleasures, eziquka ezi zilandelayo: – Italian abantu Makhe sika ekunene kwi-nokususa: isi-Italian abantu bamele elimnandi. Ibinzana mde, mnyama, kwaye handsome waba mhlawumbi coined kwi-Italy. Ndicinga ukuba uninzi ngqo abafazi fumana isi-Italian abantu ukuba kube lula kwi amehlo, ngoko ke ukuba abantu ubukele yakho nto, ngoko ke cinga isihloko ukuba Italy. Amadoda nazi kakhulu suave kwaye yenza lula ukuba bazimanye uthando kunye nabo, apho isn t a into engalunganga. Sculptures Ukuba isi-Italian abantu musa ukwenza oko kuwe, mhlawumbi ngokugqibeleleyo sculpted okkt ukuzenza. Baya idla kuba chiseled misela ka-abs, baya musa ukusebenzisa engalunganga pickup imigca, kwaye baya wear kakhulu abancinane, ukuba ikhona, impahla yokunxiba. Michelangelo ke Udavide, omnye Italy ke, uninzi ethandwa kakhulu sculptures. Ukuba ukhe ubene makhaya Florence, khangela ngaphandle yakhe contrapposto posename kwaye sibone indlela likwenza nemimangaliso kuba sibonisa ngaphandle yakhe nani. Ukuba ufuna musa unqwenela ukuba ahlawule ukubona Udavide, kukho ezimbini ngokulinganayo abasebenzi abaqhankqalazayo replicas esixekweni. Unako kanjalo intloko phezu Uffizi Mifanekiso ukubona ezininzi Renaissance sculptures kwaye awukho kwindawo enye. Carbohydrates ngu fact: abafazi crave carbs ngakumbi kunokuba abantu. Ngoko ke, kutheni na ukuzalisekisa craving kunye lovino, lasagna, pasta, kwaye isonka. Ndiza ndonwabe ezithile Italy wayeya kunikela yayo phakathi umnwe ukuba Atkins yezosondlo ukuba oko wayenako. Prussia bakholisa ukuba badle isonka ne-wonke meal, kwaye nangona ke nzima ukutya, isi-Italian pasta kwaye lovino ingaba delectable. Ukuba imozulu ngu-mnandi, kuba i-umphandle sangokuhlwa yi-candlelight. Kwaye ukuba ufuna hlasi ekhawulezayo bite ukuba badle, ungasoloko chonga phezulu sika ka-lovino kuba nje ezimbalwa euros. Ujulia u-roberts kwi-Kudla, Athandaze, Uthando kokuba ingxaki fitting kwi jeans emva ezimbalwa iinyanga Italy kuba isizathu. Gelato Gelaterias kwi-Italy ingaba njenge -s kwi-i-bangkok: baye ukuba kuyo yonke indawo, ngoko ke ngethemba ukuba ufuna anayithathela ekhohlo igumbi kuba dessert emva imoto-nzima meal. Layo s a ulwaphulo-mthetho hayi njenge-Italian umkhenkce cream. Ke kunzima ivumba i-freshly made cones kwaye bona libanzi assortment ka-flavors kwaye hayi kuba ulingeka ukuba ngena ngaphakathi. Kukho ke abaninzi okumnandi flavors ukuba oko kusenokuba nzima ukukhetha nje omnye. Ukuba uyakwazi kuwusindisa igumbi, ukwenza isigqibo sakho lula kwaye ufumane ezimbalwa scoops (Nutella, coconut, kwaye chocolate zezinye wam ezithandwa kakhulu). Kwaye ukuba craving ugwayimbo, musa kuba besoyika ukuba ingaba gelato kwi indawo a meal. Ndiye ndizixelela,”Xa kwi-Italy”kwesizathu wam gelato-kwezi imikhuba apho. Nomadic Mat uthi: mna bathanda inkcazo emfutshane flavor, kwaye ukuba ufuna kwakhona ukuya kwezi phezu, nto cures ngayo ngathi lemon gelato. Vino mna uthando elungileyo glass of iwayini kunye isidlo sasemini. Italy ke iwayini imimandla ingaba bekelela lizele vineyards. Kukho iwayini imimandla Italy, ngoko ke nisolko babotshelelwe ukuba abe abajikelezayo kufutshane omnye kubo. Uyakwazi ukuthatha i-umbutho sam utyelelo, apho kusoloko iquka kokungcamla. Ukuthenga iwayini ngomhla grocery store kwi-Italy kanjalo ridiculously cheap, ngoko ke ekubeni a nightly glass (okanye bottle) iwayini ingaba lula ukwenza nayiphi lwabiwo-mali. Architecture Kuwe awuyidingi nanye kwi uyilo ukuncoma i abasebenzi abaqhankqalazayo architecture kwi-Italy. Eli lizwe yi best ezaziwayo kuba yayo yamandulo Roman kwaye Renaissance architecture. Kukho umdla structures ezindaweni uvula. Admire i-Colosseum kwi-Eroma, Duomo kwi-Florence, colorful izindlu kwi Burano, okanye nayiphi na Italy s amazing piazzas (public i_zikwere). Kunye amawaka eminyaka ezimbalini, Italy inikeza ezininzi kangako breathtaking izinto bona. Carnevale mna uthando costume amaqela, kwaye ndiqinisekile Venice ke Carnevale ibizakuba ultimate omnye kuzimasa. Ixesha costumes kwaye zemaleko yenza mysterious kwinto kule sele fascinating isixeko. Carnevale iqala jikelele kwiiveki ezimbini phambi Ash ngolwesithathu kwaye iphela ngomhla Mardi Gras (umhla phambi Ash ngolwesithathu). Njengoko ixesha elide kangangoko kunokwenzeka kuma ngenxa enkulu crowds, dressing phezulu kuba Carnevale yi phawula kwi-i-Italian itinerary. Inqwelo Xa ndizama kwesi sihloko ka-dress-up, ulwaleko boots kwaye purses kwi-Florence, ihamba kunye i-ezivelayo fashion icandelo lomboniso, ndiya yanelisa na shopaholic ke urge. Kukho omkhulu abancinane boutiques kunye eyodwa izinto kananjalo plenty ka-street vendors ukuba peruse. Gucci, Prada, kwaye eliwaka ezinye designers ukwenza zabo ekhaya kwi-Italy. Ngaba ll ukufumana yonke into ofuna. Yenza isithuba esithe xhaxhe yakho bag kuba bonke chic iingubo kuwe ll impress abahlobo bakho kunye emva ekhaya. Italy ngu kancinci incasa ezulwini kuba ibhinqa travelers. Xa mna bathanda unguye kwaye architecture kwi-Italy, kukho kananjalo sexy abantu, intuthuzelo ukutya, basele, kwaye elaborate iziganeko ukuze umjikelo ngaphandle izizathu kutheni wonke umfazi kufuneka indulge kwi-uhambo ukuba Italy. Laura Walker isebenzisa i-website A Wandering Sole. Yena ngoku ahlala khona kwi-Portland apho yena isebenzisa Masha, i-izinto ezongezelelwayo kwaye ekhaya izinto lemveliso ekhutshwe kwi-Mpuma-Afrika. Ukongeza inkqubo yakhe ushishino, Laura imisebenzi njengoko umsebenzi coach kuba ngokutsha bafika refugees yayo isixeko. Yena imisebenzi kunye abaxhasi ukusuka zonke phezu kwehlabathi kwaye isebenzisa yakhe limited ulwazi Swahili ukukhonza Congolese abaxhasi. Yena kanjalo usebenza abaxhasi ukususela Kumbindi Mpuma, e-Asia, amanye amazwe e-Afrika, Central Emelika, Ecuba. Kuba olugqityiweyo-A-ku-Z isikhokelo kwi solo ibhinqa ukuhamba, khangela ngaphandle Kristin s incwadi entsha, Conquering Iintaba. Ngaphandle ngokuxoxa abaninzi isebenziseke iincam ka kwaye ilungiselela ucwangciso lwakho uhambo, incwadi iidilesi fears, ukhuseleko, kwaye yeemvakalelo zakho yethutyana abafazi kuba malunga abajikelezayo yedwa. Kuyo imisebenzi phezu amabini interviews kunye nezinye ibhinqa ukuhamba writers kwaye travelers. Cofa apha kwi lfunda kakhulu malunga ne-incwadi njani oko unako ukunceda wena, kwaye unako ukuqalisa ukufunda kube namhlanje. Zam endizithandayo inxalenye abahlala Florence waba strolling ngokusebenzisa kwamanye amazwe. WONKE umntu ingaba betha kwi kum.
Nanini na xa ndandisele ekubeni a engalunganga imini, mna, nento yokuba kuya kuba dlula kwi wentengiso kwaye shiya kwi kakhulu ngcono oomoya. Amadoda, carbs kwaye inqwelo. Mna nento yokuba becinga ukuba solo ibhinqa travelers kuba lokuphuma ezi stereotypes yi-ngoku. Andiqinisekanga ndiza phezu abantu, carbs, kwaye inqwelo, kwaye ndicinga ukuba ibizakuba ulwaphulo-mthetho ukuya Italy kwaye lahla zonke isithathu Usidibanise, iwayini, architecture, kwaye Carnevale uncedo ungqinelwano ngaphandle kwezo eli-ubudala stereotypes. Oko ivakala ngathi uyayazi engalunganga macala kancinci kakhulu ndicinga gelato ngu amkele impiliso ichiza kuba yonke into. Christopher, ndinguye uxolo ukuva kuwe nampumelelo elungileyo amava kwi-Italy. Abahlala Italy ngamanye amaxesha kusenokuba nzima kwaye kunzima, kodwa kukho abaninzi kangaka imiba (gelato iqukiwe.) ukuba ngxi umenze ezikhethekileyo ndawo ibe. Ndaba elinye (okanye isibini okanye isithathu) zininzi kakhulu slices ka-lovino ngexesha ndandikho apho, kodwa yayo s nzima okokuba ngomhla ngu-pizzerias kwaye hayi chonga phezulu sika. Michelle, qiniseka ukuba sihamba NAPLES kuba lovino. Uyakwazi ngamanye amaxesha fumana decent lovino kwenye indawo kwi-Italy, kodwa Bella Napoli apho kwaba invented. Fantastic nengqondo-ebhudlayo. Olukhulu Ngeposi. Ndinguye hoping ukuyenza ukuze Italy kwakhona ukubhala a ngeposi. Ndaya milancity in italy kulo nyaka uphelileyo ngexesha fashion ngeveki, kodwa ke akusebenzi ukuba ngenene oko kulindeleke ukuba ukususela Italy. Xa umlingane wam kwaye mna babebaninzi Italy kwiminyaka embalwa edlulileyo sibe yintoni i-avokhado, gelato wonke omnye umhla kwaye, kwezinye ezithile, ezininzi umphinda-phinde ngo mhla. Kanjalo, eyona lovino mna ve ngonaphakade tasted waba kwi-Naples. Owu, indlela ndifuna umva Italy Yay. Ngoko ke, iindaba kuwe waya Naples. Kukholisa ukuba overlooked xa abantu ndwendwela Italia. Absolutely omnye zam endizithandayo izixeko ehlabathini. Eli mnandi ngeposi, kwaye ndiya uyavuma kunye ukutya kwaye architecture inxalenye kakhulu. Mna uyakwazi ukuchitha kwiintsuku nje ehamba jikelele ezitratweni kwi-Italian ezinemigodi kwaye amehlo abo ukutya. Pizzas kwaye gelato kunjalo thatha toast Nganye-nganye, ndiya kuvuma, xa isi-Italian babantu abakho wam nto, architecture, ukutya, iwayini made phezulu kuba kubhaliwe umhlambi. Mna admit: ndawela kuba i-Italian umntu. Ngethamsanqa, wawa kuba kum, kakhulu. Ndibathanda ekubeni i-affectionate, expressive, handsome hubby kwaye ukulungele kwesizathu ukuya kutyelela usapho Eroma kwaye Naples. Ewe, ndiya kuvuma Italy ngu enjalo fun ndawo abafazi. Mna wayemthanda wandering ngokusebenzisa kwamanye amazwe kwaye ukuthenga pashminas. Mna kanjalo waba nje blown kude yi-unguye kwaye architecture ezindaweni ndaya. Ndaba kakhulu phenomenal mushroom risotto kwi-peoriacity in italy kwaye loo okumnandi gelato kwi-Roma kwaye Florence. Oh, Italy. Mna andinaku ulinde ukuba umva. Ndiya kuvuma, akukho t nantoni na awunokwazi uthando kwi-Italy. Eneneni, ukuthetha malunga zinokuphathwa abantu, Cinque Terre randy wathabatha a dip ehleli kwi eliweni elandelayo kuthi nge ukuhlamba isi-Italian ubuhle, uzalise kunye zinokuphathwa pink bikini isuti kwaye axis powers iinwele. Kwi-States, izakuba epheleleyo kodwa ngomhla kolwalwa kwi-Italy stunning. Ndithhatha ezimbalwa iifoto. Ndaba. Mna m a guy, kodwa ndiza cryocooling ngeli nqaku. Mna ve sele Eroma kuba kwiintsuku ezimbalwa, kodwa isiqingatha ixesha kwabakho wachitha kwi-British Embassy (enkosi yam eks kwaye bombing) ngoko ke, kodwa kuza t get phantse kangangoko gelato kwaye lovino ixesha njengokuba mna, nento yokuba kufuneka liked. Owu, kulungile, ndiyaqonda mna ll kufuneka ndiye kwakhona mna ve sele abahlala Italy kuba unyaka ngoku ke kuyazi iselwa kakuhle kwaye kufuneka bavume lokutya kwaye umkhenkce cream ingaba eyona ngonaphakade. Kodwa asingabo bonke abantu bamele mde, onzulu kwaye handsome, ingakumbi xa ufuna cm mde ngathi kum, kwaye abaninzi ngabo shorter.
Ndicinga ukuba uninzi izimvo apha ziqulathe eyona imbi uluhlu ngokufanayo-iindawo mna ve ngonaphakade weva malunga Italy. Italy sele iingxaki ezininzi kwaye izinto ezininzi musa t umsebenzi, kodwa ukuba ufuna ngokwenene ukwazi ukuba eli lizwe uyazi ukuba kubaluleke kakhulu ngokufanayo umba kulo iindawo ezininzi ehlabathini. Kukholisa ukuba njengoko kuchaziwe lovino, pasta kwaye mandolin, kodwa ukuba ziyinyani travelers (kwaye njengoko ufunda le hetalia kufuneka ibe) uyazi ukuba Italy asingomsebenzi Eroma, Venice, Florence kwaye milancity in italy. Kukho enkulu ngezixhobo ezahlukeneyo ezahlukeneyo landscapes, oyena yenkcubeko yelifa lemveli yehlabathi kwaye izinto ezininzi ukwenza. Apha uyakwazi ukufumana gqabi groves kwaye steep iinduli, owozelayo villages kunye charming cobbled ezitratweni, abundant vineyards, medieval castles, ubudala amabandla kwaye zonke ukuba unguye kwaye imbali ukwakha kwixesha elidlulileyo. Ngoko ke, nceda musa t ukubhala trivial izimvo malunga ntoni wena musa t uyazi kakuhle kakhulu. Ndicebisa ngaba amanye amakhonkco ukuba uza kukunceda ukwazi Italy kancinci ngakumbi kwaye (mhlawumbi) ukuncoma kuyo.italia.oko end ekhaya. Ndinga uthando ukundwendwela Italy kwaye ukuhlala kwindawo enye yezi abancinane ezinemigodi. Mna ve zange uhleli ngaphandle KWETHU kodwa intliziyo yam soloko sele kancinane phambi kwexesha kwaye andifuni t ukuqonda ukuba kutheni. Naziphi na iingcebiso izakuba eluncedo ngenxa yam yokuqala uhambo. Mna mhlawumbi uphumelele ukuba ufuna ukuza ekhaya mna uthando oku. Italy kubaluleke ngokwenene breathtaking, sights, tastes, angaqhelekanga, adventures ndinguye ngothando kunye kweli lizwe kwaye mna andinaku ukulinda ukuba umva. Mna ke kwi-Italy kwi-Meyi, mna uthando yonke into malunga Italy. Mna ingakumbi liked Florence. Ndifuna umva kunyaka olandelayo ku may. Ndine ukubona ukuba kweli xesha endinokuyenza ngayo kwi-lwabiwo-mali. Oh, Gelato ngu comment. Ixesha elizayo cinga makhaya kanjalo abanye encinane kwisixeko, njenge Treviso, umzekelo, ngokuba igadi ka-Venice, absolutely enchanting, homeland ka-Prosecco Iwayini kwaye ulungile kuba inqwelo.
Heee wonke umntu
Ngenxa kweminyaka eli ngeposi kwaye ubunzima ngokwee-moderating ilanlekile ka-izithuba spam, izimvo apha zithe ngumdla
← Kwi-intanethi dating kwaye incoko ngaphandle ubhaliso, free, ukubona ngamnye enye kwi-webcam - Surf web
Lonely umfazi ifuna ukuya kuhlangana Dating Kwiwebhusayithi →